प्रचण्डलाई बाबुरामको जवाफ: महलमा बस्ने, चिल्ला गाडी चढ्ने अनि धुवाँधुलो देख्दिनँ भन्ने ! - Sainokhabar
होमपेज / राजनीति / प्रचण्डलाई बाबुरामको जवाफ: महलमा बस्ने, चिल्ला गाडी चढ्ने अनि धुवाँधुलो देख्दिनँ भन्ने !
प्रचण्डलाई बाबुरामको जवाफ: महलमा बस्ने, चिल्ला गाडी चढ्ने अनि धुवाँधुलो देख्दिनँ भन्ने !
बिहिबार, पुष १२, २०७५ , साइनो खबर
संसदमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई। फोटो : नारायण महर्जन
संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सरकारको बचाउ गरेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई जवाफ फर्काएका छन्।
सरकारको बचाउ क्रममा प्रचण्डले राजधानीमा धुँवाधुलो कम भएको र मास्क लगाउने मान्छे घटेको बताएका थिए। उनले आफ्नो ललितपुरको घर जाने बाटो मात्र नभइ धेरै सडक कालोपत्रे भएको बताएका थिए।
प्रचण्डपछि संसदको रोष्टमबाट बोलेका पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले व्यङ्ग गर्दै सोधे– चश्मा फेरिन लागेको त हैन।
उनले प्रचण्डको नाम भने लिएनन्।
‘जनताको घर दैलोमा बसेर सुख दुःख भोगेर आएका मानिसहरु सत्तामा पुग्ने बित्तिकै जनताको सपना र दुःख बिर्सन लागेको त हैन,’ भट्टराईले भने, ‘आलिशान महलमा बस्ने, चिल्ला गाडी चढ्ने, चिल्ला सडकमा कुद्ने अनि धुवाँधुलो देख्दिनँ, केही पनि छैन भन्ने। के यो सुहाउने कुरा हो?’
भट्टराईले प्रचण्डलाई त्रिभुवनसँग तुलना गरे।
‘राजा त्रिभुवनलाई ‘सरकार म भोकै छु’ भन्दा ‘दुध र भात पनि खान पाएनौ’ भन्थे रे,’ भट्टराईले भने, ‘कतै हाम्रा नेता साथीहरुले जनताका दुःख पसिना, ती यथार्थ, जरजर अवस्था बिर्सेर सबैतिर चिल्लो, सबैतिर राम्रो देख्ने, हाँसीखुसी देख्ने भयो भने.. भ्रम हो कि यथार्थ हो।‘
भट्टराईले नयाँ सरकार आएको दश महिनामा समेत आफ्नो ब्रह्मले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएको नदेखेको बताए।
उनले सरकारले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार गरेको दावी माथि समेत हमला गरे। प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको भारत र चीन भ्रमणपछि सम्बन्ध राम्रो बनेको बताएका थिए। प्रचण्डले पहिलो विश्वयुद्धसम्म युरोप शक्तिशाली रहेको तर दोश्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका शक्तिशाली रहेको उल्लेख गर्दै अब एसिया र आर्थिक हिसाबले चीन शक्तिशाली बन्ने विश्लेषण संसदमा गरेका थिए।
तर भट्टराईले आफूले नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो नपाएको बताए।
‘म पनि युरोप अमेरिका अध्ययन भ्रमणको सिलसिलामा गएँ। तर देशको छवि उजेलिएको छैन’, भट्टराईले भने, ‘बरु सरकारको देश र जनताको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरु माथि सबैतिरबाट प्रश्न उठिराखेको छ। न उत्तर न दक्षिण न पश्चिम न उत्तर, न कसैको नजरमा पनि यो सरकार र यसका नेताहरु प्रतिको विश्वसनियता मैले देखिनँ।‘
उनले नेपाली नेताको विश्वास कम हुनुको कारण नेपालको भित्री खपतका लागि युद्ध नै गर्न लागेको जसरी प्रस्तुत हुने तर बैठकहरुमा लुत्रुक्क पर्ने कारण रहेको जिकिर गरे।
उनले नेपालले उत्तर र दक्षिणसँगै पश्चिमा शक्तिलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने जिकिर गरे।
‘बाघ बुढो भए पनि बिरालो हुन्न। दुब्लो बाघ हुन्छ। तीन शक्ति बीच सन्तुलन आवश्यक छ’, भट्टराईको भनाइ थियो।
भट्टराईले संघीयता कार्यान्वयनमा सफलताको कुरा गरे पनि सत्तारुढ दलका मुख्यमन्त्रीले नै सरकारको आलोचना गरिरहेको बताए। उनले निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्याको घटना ढाकछोपमा संलग्न प्रहरी माथि केरकार नभएकोमा प्रश्न उठाए।
भट्टराईले संविधान संशोधन गर्न ढिलाई भएको तथा संविधानले भनेका स्वायत्त क्षेत्र नतोकिएकोमा आपत्ति जनाए। उनले नयाँ सरकार निरन्तरता भन्दा पनि नयाँ संविधान र व्यवस्था पछि बनेका कारण पूर्वाधारमा काम हुन नसकेमा सरकारको आलोचना गरे। –सेतोपाटी